Ugwetshwe udilikajele odlwengule usana olukuhlaza cwe (4) – INSIMBI
Ugwetshwe udilikajele odlwengule usana olukuhlaza cwe (4)
September 11, 2021 September 11, 2021 Siphelele Xaba	0 Comments
INkantolo ithe uNsele akakulungele ukuphatha isibhamu kanti igama lakhe lifakwe ohlwini lwabalahlwe namacala okudlwengula.
UMNDENI wentombazanyana (4) eyanukubezwa ngokocansi uFezile Nsele wayithembisa ukuyibulala uma ike yatshela omunye umuntu ngesigameko, usukhululekile emva kokuba umdlwenguli egwetshwe udilikajele.
UNsele, 27, utholwe enecala lokudlwengula intombazanyana yaseMlazi, wagwetshwa udilikajele yiNkantolo Yesifunda yakuleli ilokishi ngecala alenza lulunye kuNdasa (March) ngonyaka wezi-2019. Isigwebo sikaNsele siza emuva kokuba inkantolo izwe ubufakazi bokuthi wamudlwengula kanjani umgilwa.
UConstable Sithobile Nyoni, wezokuxhumana emaphoyiseni aseMlazi, uthe ngosuku lwesigameko uNsele wahudulela umgilwa endlini yakhe, wamudlwengula emuklinyile.
“UNsele wabe esenika le ntombazanyana amasenti angama-50 (50c) wayithembisa ukuthi uzoyibulala uma ike yatshela omunye umuntu ngesigameko. Ngesikhathi ingane iphuma kule ndlu inqunu isingezansi, yabonwa umakhelwane owathi uma eyibuza yamutshela ukuthi idlwenguliwe,” kusho uConst Nyoni.
Lo makhelwane wabe esecela umgilwa ukuba amukhombise lapho enukubezelwe khona. UConst Nyoni uthe uma umakhelwane nale ntombazanyana befika endlini lapho kwenzeke khona isigameko, isicabha sasivuliwe kancane.
Uthe: “Ngesikhathi umakhelwane ephusha isicabha sendlu, ilapho abona khona ibhulukwe likamgilwa phansi endlini kanti uNsele wayelele. Umakhelwane wabe esephuthuma eyobikela udadewabo kanina wengane ngalesi sehlo.”
Uqhube wathi, kwabe sekushayelwa umama kamgilwa ucingo watshelwa ngokwenzeke enganeni yakhe. “Umgilwa wathunyelwa ePrince Mshiyeni Memorial Hospital lapho kwaqinisekiswa khona ukuthi udlwenguliwe. Kwabe sekuvulwa icala lokunukubeza ngokocansi emaphoyiseni aseMlazi, idokodo ladluliselwa ophikweni oluphenya amacala okunukubezwa kwezingane,” kuchaza uConst Nyoni.
Uthe umsolwa wabe eseboshwa kanti umphenyi wecala ukuqinisekisile ukuthi unobufakazi obuqinile obenze ukuthi uNsele aphonswe ejele impilo yakhe yonke. INkantolo ithe uNsele akakulungele ukuphatha isibhamu kanti igama lakhe lifakwe ohlwini lwabanamacala okudlwengula.
← The ConCourt ruled that elections would not be postponed
Miss Harding 2021 Finalist – Amahle Mthembu →
KUMUNCU NOSHUKELA NGEMIGQA EMIDE EMAHHOVISI ABASEBENZI
April 14, 2021 April 14, 2021 Insimbi News Reporter	0
December 13, 2021 December 13, 2021 Siphelele Xaba	0
FAMILY HELD UP AT GUNPOINT, ROBBED
March 30, 2021 March 30, 2021 Siphelele Xaba	0